Cayenne: toro-hevitra sy tetika amin'ny fampitomboana sy fihinanana azy - Ikkaro
firosoana >> zaridaina >> Patch legioma >> Cayenne
Ahoana ny fitahirizana azy ireo
Tiako ny mihinana cayenne vaovao, fa satria be loatra foana dia tsy maintsy mieritreritra izay hatao amin'izy ireo ianao. Afaka mamonjy azy ireo amin'ny fomba samihafa isika.
Ampamainina izy ireo ary laninao rehefa ilaina izany.
potehio ary ataovy vovoka
potehio ary afangaro amin'ny sira mba haka sira masiaka
ahosotra diloilo mba hampangotraka ny menaka.
Ireo no naoty tamin'ny taona nambarako isan-karazany.
Mividy zavamaniry voninkazo roa avy amin'ny akanin-jaza aho. Manana fampisehoana mahatalanjona izy ireo, na dia ao anaty vilany aza dia nofenoina cayenne. Ao amin'ny kirihitra lehibe indrindra dia nakako làla 92 tamin'ny 64. Ity faharoa ity dia saika tsy manaikitra ka tsy hamonjy ny voany aho
Amin'ity taona ity aho dia mamafy indray avy amin'ny masomboly iray tamin'ny zavamaniry tamin'ny taon-dasa, ilay somary mangidihidy.
Amin'ny 6-2-2020 dia alentiko ny masomboly ary amin'ny 10 dia amboleko ao anaty zana-kazo ary apetrako amin'ny lamba firakotra mafana ary mandra-pahatongan'ny fahavaratra vao manomboka mifantina cayenne aho. Inona koa, amin'ny Novambra isika ary mbola misy cayennes maintso.
Maneho hevitra momba azy aho satria imbetsaka dia voalaza fa satria namboly ny voa dia mamoa ianao ao anatin'ny 3 volana. Saingy mbola tsy natezitra mihitsy aho talohan'ny 5-6 volana.
Tamin'ny farany dia namboly zavamaniry cayenne 7 aho, fa tamin'ity indray mitoraka ity, fa tsy nopetahako poti, dia nafindra tany amin'ny zaridaina aho. Noho ny olana amin'ny areti-mandoza dia tsy afaka nanatrika azy tsara aho satria tsy afaka mihetsika isaky ny maniry.
Ny kirihitra dia kely kokoa noho ny tamin'ny taon-dasa ary nisy koa sakay sakay isaky ny zavamaniry. 70 amin'ireo zavamaniry 7, lavitra lavitra ny taona 2019 saingy ampy hody any an-trano.
Tsy haiko raha ankoatry ny fanondrahana dia nisy fiantraikany tamin'ny tany ny tany, ny tany ao amin'ny tanimboly dia tsy nisy zezika an-taonany maro, ary tsy nisy fikarakarana.
Amin'ny taona 2021 dia te hanandrana ny zezika aho.
Ny vinavina dia ny hamboly zava-maniry 6, amin'ny zaridaina iray ary hitsapana ny tany samihafa.